ပညာေ၇း…. ဝေးသည်။မရှိ ။ :D အဲလိုမဖြစ်ရလေအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ပညာေ၇း…. ဝေးသည်။မရှိ ။ :D အဲလိုမဖြစ်ရလေအောင်
ပညာေ၇း…. ဝေးသည်။မရှိ ။ :D အဲလိုမဖြစ်ရလေအောင်
Posted by Shwemannmay on May 11, 2010 in Other - Non Channelized |2comments
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ ဖွင့်ခွင့်ပေးနေပြီဆိုတာကို ဒီလပိုင်းတွေမှာကြားနေကြရတာကြာပါပြီ။ ကျောင်းဖွင့်ချိန်နီးလာတာနဲ့ အမျှ အမျိုးမျိူးသောသတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ သိန်း ၃၀ အထိ ဈေးပေါက်နေပြီလို့ဂျာနယ်တစ်ခုမှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ပညာေ၇းသည်လူတိုင်းအတွက်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ပညာေ၇းပာာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းအတွက် သက်သာလွယ်ကူသော ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေသော အရာဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဈေးပိုပေးတိုင်းပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ပညာေ၇းမျိူးရနိုင်မယ်လို့ မျှော်မှန်းလို့ မရနိုင်ပေတဲ့ငွေပေးပြီးရယူတယ်ဆိုကတည်းက ၀န်ဆောင်မှူကိုမကြိုက်ရင် မကျေနပ်ရင် ပြောေ၇းဆိုခွင့်ရှိလာတာအမှန်ပါ။ ပညာေ၇းဝန်ဆောင်မှူကို ၀ယ်ယူသူဖြစ်လာတဲ့အတွက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံ ၊ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ ပုံစံတွေကို ပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန်ပြောဆို ခွင့် တောင်းဆိုခွင့်ရှိလာပါပြီ။ ရှိတဲ့အတိုင်းလည်း ပြောရဲဆိုရဲ တောင်းရဲ ဝေဖန်ရဲ ဖြစ်လာကြပါပြီ။
မိဘဆိုတာတော့ သားသမီးကို အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုပေးဆပ်ဖို့ စေတနာရှိကြတာပါပဲ။ ကြိုးစားအားထုတ်ကြတာပါပဲ။ မိမိတတ်နိုင်တဲ့ ဘောင်၊ ပမာဏအတွင်းကနေပြီး မိမိတို့ သားသမီးများကို အကောင်းဆုံးသော ပညာရေးကို သင်ကြားစေလို ကြတာပါပဲ။ တတ်နိုင်သူများအတွက်တော့ ရှိစေတော့ပေါ့။ မုဒိတာပွားရပါတယ် ။ မတတ်နိုင်သူအများစုဘက်က စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ။တကယ်တော့သိန်း ၃၀ ဆိုတဲ့ပမာဏပာာနည်းတာမပာုတ်ပါ။ ဒီလိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ လို အစိုးရကျောင်းတွေကေ၇ာ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှူ မလုပ်ပေးနိုင်ကြဘူးလား။ လုပ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။ လုပ်ပေးချင်ကြဖို့ သာလိုပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်မှာ အစိုးရကျောင်းတွေက ကလေးတွေ ဂုဏ်ထူးရှင်တွေ အများကြီးပေါ်ပေါက်နေတာပါပဲ ။ နှစ်တိုင်း၁၀ တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်းထွက်ပြီးပြီဆိုရင် သတင်းစာမှာ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းတွေ ပလူကိုပျံနေအောင် ပါတာပါပဲ။
သို့ သော် ဒီကလေးတွေကိုကြည့်ရင် အစိုးရကျောင်းကို နာမည်ခံသာတက်ပြီး ပြင်ပက နာမည်ကြီးကျူရှင်တွေက လေ့ ကျင့်သင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ ကလေးတွေဖြစ်တာကို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ခလေးများကလည်း နားလည်ကြရှာပါတယ် ။ ကိုယ်တက်ခဲ့ တဲ့ ကျောင်းကိုတော့ပြန်ပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတွေလည်း သတင်းစာထဲမှာ ထည့်တဲ့သူလည်းထည့်ကြပါတယ်။ သို့ သော်… သို့ သော်ပေါ့လေ တကယ့်တကယ် သူတို့ နဲ့ စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာ ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းဘက်ကို ပိုပြီး အလေးသာတာ ၊ဦးစားပေးတာ၊ အဲဒီကဆရာတွေကိုပိုပြီး အထင်ကြီးတာကို သိသာစွာမြင်ရပါတယ်။ ဒါပာာ ဘာကြောင့်လဲ။
အစိုးရကျောင်းတွေမှာ စာကို သေချာမသင်ကြားဘူးဆိုတဲ့အသိပာာ ကလေးတွေ နဲ့ ကလေးမိဘတွေခေါင်းထဲမှာစွဲမြဲနေတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ တကယ်လည်း အဲဒီလိုဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ ကျောင်းကဆရာ၊ဆရာမများကလည်း
သူတို့ ကျူရှင်က သင်လိမ့် မပေါ့ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့အလုပ်ကို မလေးစား၊ မလေးစားတော့ကောင်းကောင်းမသင် ၊မသင်တော့ ကျောင်းသားကမကြိုက် ၊ မကြိုက်တော့ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းသွားတက်၊ အဲဒါနဲ့ ပဲနောက်ဆုံးတော့ အစိုးရကျောင်းများသင်ကြားမှူ
တကယ်ကြိုးကြိုးစားစား စေတနာအပြည့်နဲ့ သင်တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတွေလည်း ရှိကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးကောင်းဖို့ တော့လိုတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်၊
သင်ကြားမှူလည်းကောင်းတယ်၊ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာတယ်ဆိုတဲ့ နောက်တော့ ကျောင်းသားနဲ့ ကျောင်းသားမိဘများ က ဒီကိုပဲ ပြန်လာကြမှာပါပဲ။
ဒို့ကတော့အဲလိုမထင်ဘူး။အစိုးရကျောင်းကဆရာ၊ဆရာမများတိုင်းလည်း ပုဂ္ဂလိကကျောင်းကဆရာ၊ဆရာမတွေလို ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရတာမဟုတ်ပါဘူး။
ရွှေမန်းမေပြောထားတဲ့ အလုပ်ကို မလေးစား၊ မလေးစားတော့ကောင်းကောင်းမသင် ဆိုတဲ့ဆရာ၊ဆရာမတွေကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်ပါ။အနည်းဆုံးတော့
ငါ့တပည့်လေးတွေအောင်ပါစေ ဆိုတဲ့စေတနာလေးတော့ရှိကြတာပဲ။မရှိဘူးဆိုရင် ကြိုက်သလိုပြောပါ။ကိုယ်ပြောတာကိုယ်တာဝန်ယူပါတယ်။
ကလေးတွေက အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်တွေရဲ့ အရသာကို လက်တွေ့ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲတွေ့နိုင်တယ်
သိန်း ၃၀ ဆိုတာ များကောင်းများလိမ့်မယ်
ဒါပေမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့သူတို့ဘ၀ အုတ်မြစ်ဟာ သူတို့ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စေလိမ့်မယ်